26 April 2013- Twi Online
- 26th March 2013 - Twi Translation.
ƐFIADA NYAMESƐM: Oforesuo Bosome da a ɛtͻ so 26, wͻ afe 2013
(Summary of Friday sermon – 26th April2013 – Ashanti Twi Translation)
FA NOKWARE NE PƐPƐƐPƐYƆ YƐ ADWUMA.
O! Mo nkurͻfoͻ a moagye adie! Monyina hͻ pintinn ma atɛmmuo mu nokorɛdie, na monyɛ nokorɛ adansefoͻ Allah nti, sɛ mpo etia mo ankasa anaasɛ etia awofoͻ ne abusuafoͻ mpo a. Sɛ ͻyɛ ͻdefoͻ anaasɛ ͻyɛ ohiani, Allah susu wͻn mienu ho kyɛn mo. Enti mma mo nni honam akͻnnͻ akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mo bɛtumi adi nokorɛ pɛpɛɛpɛ. Na sɛ mo de nokorɛ sie anaasɛ mo kwati no a, ɛnneɛ monkae sɛ Allah ani tua deɛ moyɛ nyinaa na Ɔbɛbͻ mo ɛho amanneɛ (4:136).
O! Mo nkurͻfoͻ a moagye adie! Monyina hͻ pintin ma Allah, na moni adanseɛ tenenee mu; na momma nnipa binom tan ntwetwe mom ma monnyͻ adeɛ a ɛnnyɛ pɛpɛɛpɛyͻ. Monyɛ pɛ mmerɛ nyinaa. Ɛno na ɛbɛn teneneeyͻ. Na monsuro Allah. Ampa ara sɛ, Allah nim deɛ moyͻ na Ɔbͻbͻ mo ɛho amanneɛ (5:9).
Allah ahyɛ nkurͻfoͻ no a wͻagye adie na wͻyͻ nwuma pa no bͻ sɛ wͻbɛnya bͻnefakyɛ ne akatua a ɛso (5:10).
Mmerɛ nyinaa no, Islam atanfo no ka sɛ, Islam yɛ atutuasɛm anaa mogyahwiegu som na wͻn de ͻtan hunu tan som no. Mogyahwiegu biara a, ɛbɛkͻ so wͻ asaase yi so no, sɛ ɛyɛ wͻn a wͻfrɛ wͻnho Muslimfoͻ, anaasɛ obi anaasɛ Islam kuo no a wͻfrɛ wͻnho Jihad no na ɛyͻeɛ a, wͻkyerɛ sɛ Kur’aan no ne Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no nkyerɛkyerɛ na wͻn ka kasa a ɛmmfata de tia yɛn. Ɛnnɛ yi, deɛ ͻbrɛɛ ne ho ase maa Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no Jama’at a, ɛkasa tia wͻn a wͻka nsɛm a ɛnnyɛ nokware de tia Kur’aan no na ɛsan yi wͻn nkasa tia no ano.
Kur’aan kyɛfa no mu bi y’ada no adi no yi nsɛm a ɛtia Islam no ano, sɛ ɛyɛ Islam mu basabasayͻ no, ɛno ne kyɛfa a y’ada no adi no. Wei yɛ nhwɛsoͻ pa a ɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ pa a ɛwͻ Islam mu. Obi a ͻnnyɛ Muslimni a ͻdwene adwene pa biara ntumi mboa na mmom ͻbɛgye saa nkyerɛkyerɛ yi ato mu. Na w’asan ahwehwɛ baeɛ a ͻbɛnya saa nkyerɛkyerɛ yi? Wͻn a wͻnnyɛ Muslimfoͻ a wͻbɛn yɛn Jama’at yi ka sɛ, ɛwͻ mu sɛ wͻhunu saa neyͻͻ no wͻ yɛn Jama’atfoͻ no bi ho, nanso yɛn Jama’at no mu ntrɛ na wͻn pɛ sɛ wͻhunu saa nkyerɛkyerɛ yi ho mfonin wͻ som ahodoͻ a aka no ho. Ahmadiyyafoͻ yi saa nsɛm yi anaa wͻ wͻn ankasa nteaseɛ mu ne deɛ wͻn hunu na wͻtaa da suban pa adi.Kwan bia so no, ɛwͻ sɛ yɛma yɛn ani da hͻ na yɛ hwɛ yɛn anamͻntuo mu yie. Ɛwͻ mu sɛ, yɛbͻ yɛn ho mmͻden na yɛyi akyineɛ biara firi hͻ na yɛ san so di nkonim kɛseɛ. Yɛ hunu sɛ nsɛmtwerɛfoͻ no bi ma yɛn din, ɛbi nso wͻ hͻ a ɛnnyɛ din na wͻsan na di adanseɛ sɛ Muslim kuo a wͻn ndͻͻso kasa tia awudie a ɛrekͻso na wͻsan pɛ sɛ wͻde pɛpɛɛpɛyͻ ba wͻ berɛ a, wͻka sɛ ɛno na Islam nkyerɛkyerɛ pa no.
Hadhrat Khalifatul Masih tie saa nsɛm a ebinom keka sɛ ͻda Islam nkyerɛkyerɛ pa no adi, ͻnya tema na n’adwene si so sɛ, ehia sɛ yɛsesa yɛn abrabͻ na yɛhwɛ kwan korͻ ne mmerɛ dodoͻ a yɛde saa nkyerɛkyerɛ yi de yͻ adwuma. “Ɛno yɛn nso sɛ yɛbɛtumi ama wͻn a wͻtan na wͻsan tia yɛn no aka wͻn ano ato mu, wͻ berɛ a, sɛ awiase no rehwɛ yɛn anamͻntuo a, wͻn hunu yɛn sɛ yɛboro saa tebea no a yɛka no anaa? Ɔman anaa kuo biara nokware da adi wͻ berɛ a wͻwͻ amaneɛ mu na obiara a wͻwͻ kuro anaa kuo no mu ɛyͻ Nyame nkyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛsͻ Nyame ani wͻ berɛ a wͻbɛgyina amaneɛ biara ano.
Ɛwͻ sɛ saa dwumadie yi yɛ soronko sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyi wͻn afiri amaneɛ mu asomdwie mu. Nnyɛ sɛ yɛda nkyerɛkyerɛ soronko no adi no mma kuo no nyɛ soronko. Ɛwͻ sɛ Muslimfoͻ no a, wͻnnyɛ Ahmadiyyafoͻ no kyerɛ Islam nkyerɛkyerɛ no de kyerɛ wͻn a wͻnnyɛ Muslimfoͻ no. Wͻn nkyerɛkyerɛ soronko a wͻda no adi de kyerɛ Islam ahoͻfɛ ne ne nyinasoͻ anaa adanseɛ no ma no yɛ fɛ ma wͻn a wͻnnyɛ Muslimfoͻ na afei nso ɛnam wͻn suban pa ne wͻn ayɛmyɛ nti, ebia wͻn a wͻnnyɛ Muslimfoͻ no gyae tan a wͻde tan Islam no. Ɛwͻ sɛ Ahmadiyyani biara dwene sɛ, sɛ wͻda Islam nkyerɛkyerɛ soronko no adi kyerɛ ewiase a, ɛwͻ sɛ wͻda wͻn ho adi sɛ wͻyɛ Ahmadiyyafoͻ ne deɛ ͻbɛsiesie Islam no akyidifoͻ. Islam nkyerɛkyerɛ soronko a Ahmmadiyyafoͻ no kyerɛkyerɛ aseɛ no mma onipa no nni mu anaa ͻnnyɛ nipa titire nkoara na mmom ɛsan ma kuo no animonyam no da adi san boa ma ͻdͻ na asomdwie ba.
Sɛ yɛnte Ahmadiyyani ase fa ne nkasaeɛ ne ne suban ho a, nkurͻfoͻ bɛka sɛ saa nipa yi ka nsɛm sei nanso ͻnni so, ͻsan yɛ ade foforͻ na ͻnsan nhyɛ ade pa no ma. Mmom yɛka no kwa sɛ saa nipa sei yɛ Ahmadiyyani na ͻssan ka nsɛm pii na ͻsan ka sɛ pɛpɛɛpɛyͻ ne atɛmmupa, nanso wͻn mu no, yɛwͻ nkurͻfoͻ a wͻn mmu atɛn pa. Nkurͻfoͻ a wͻn ne Ahmadiyyafoͻ bi di dwa twerɛ ma Hadhrat Khalifatul Masih ɛfa asisie ne ndaadaa a Ahmadiyyafoͻ no bi yͻ. Saa kwan yi so na ɛma Ahmadiyyani no sɛe Jama’at no animonyam na ɛbɛyɛ ͻhaw. Saa nti no, w’ayɛ bͻne kɛseɛ ɛfiri sɛ ne kasa ne ne suban no bͻ abira. Nokorɛ sɛ, na wei nso yɛ Bͻhyɛ Messiah (ANN) no dadwene na ͻsan kaa sɛ, mma obiara ngu n’anim ase wͻ berɛ a w’agye no adie.
Nsɛmpͻ a m’aka no wͻ kyɛfa a me kenkan no mfitiaseɛ no, ɛwͻ sɛ yɛdi so wͻ gyinabrɛ biara mu, sɛdeɛ ɛbɛyͻ a, ɛbɛyɛ yɛn suban na atwe yɛn afiri bͻne ho. Ɛboa ma yɛtwe yɛn ho firi bͻneyɛ ho, biribiara a ɛnsɛ mfata, biribiara a nokorɛ nnim anaasɛ biribiara a ɛbɛtumi edi obi dɛm. Nyankopͻn nkyerɛkyerɛ pa a yɛda no adi ne Islam mfonin pa ne ne nhwɛsoͻ pa no bɛba mu wͻ berɛ a Ahmadiyyafoͻ bɛda no adi wͻ gyinabrɛ biara mu na wͻde nsɛmpa ne suban pa bɛyͻ. Anamͻntuo a yɛbɛtumi de anya saa gyinabrɛ a m’akenkane no wͻ Kur’aan kyɛfa a edidisoͻ no, ɛwͻ sɛ yɛdi so wͻ gyinabrɛ biara mu. Efie, ͻman no mu, yɛn yͻnkofoͻ, afoforͻ ne yɛn atamfoͻ. Wei nkoara na ɛbɛma obi ayɛ ogyidini mapa na yɛhunu no sɛ ͻyɛ awieɛ mmerɛ yi mu Imam no akyidini, nte saa ne nsɛmkaeɛ no nyinaa bɛyɛ kwa na w’abu tema a Bͻhyɛ Messiah (ANN) no wͻ ma yɛn no. Yɛn botaeɛ ne sɛ yɛbɛte saa nsusueɛ no so, na y’ayi afiri hͻ.
Asɛmpͻ a edi kan wͻ kyɛfa a m’akenkan ne sɛ, ɛwͻ sɛ yɛdi Nyankopͻn mmra nsɛm no ho adanseɛ. Mma yɛnnyɛ pɛsɛmenkomenya wͻ Nyankopͻn adanseɛ ho, mmom ɛwͻ sɛ yɛyɛ ma Nyankopͻn anigye ho. M’asan aka sɛ yɛn nsa bɛka wei wͻ berɛ a yɛasi gyinabrɛ bi fapem na wei ntumi nyɛ adwuma wͻ berɛ a nokrɛ nka ho. Wei nsan nso ntumi nyɛ adwuma wͻ berɛ a yɛnndi Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no nhyɛ a ͻde ahyɛ yɛn sɛ yɛnya tema ma yɛn nua tesɛ deɛ yɛnya tema ma yɛ ho no. Nyɛ sɛ obi bɛpɛ atenmupa ama ne ho na w’akasa ho wͻ berɛ a ne nsa anka na mmom sɛ ɛba sɛ, ͻde obi asɛdeɛ ma no a na ͻrehu hyɛda. Sɛ yɛbɛpɛ atenmupa ama yɛn ho no, Kur’aan Kyɛfa ahodoͻ no, Ahadith ne Bͻhyɛ Messiah no ntwerɛeɛ no de Nyamesuro hyɛ wͻn a wͻtiatia wͻn nyͻnko faahodie so no ne deɛ yɛatiatia ne faahodie so no. Na mmom, sɛ ɛwͻ sɛ obi ma nokware adenseɛ, kyɛn sɛ yɛbɛdi adanseɛ nokware mu na y’ekyea anaasɛ yɛbɛyɛ ɛneɛma basaa na aseɛ asɛm no anaasɛ yɛbɛdi aboa baako, anaasɛ yɛbɛdi aboa deɛ ͻbɛn yɛn anaasɛ de yɛpɛ n’asɛm. Wei mma yɛn nnyɛ agyidifoͻ mapa ɛfiri sɛ adeɛ a gyidini mapa bɛyɛ biara no ͻyɛ de nya Nyankopͻn animonyam na wei yɛ nokware wͻ aberɛ a obgi nya akokoduro sɛ wͻbɛdi adanseɛ atia ͻno ankasa ne ho.
Ɛnni kwan sɛ amaneɛ biara a yɛdi nokware adanseɛ a ɛbɛba no ɛfa yɛ ho. Wei bɛtumi ayɛ amaneɛ bi a ɛho nnipa bi bɛhyia, yɛmma, namfoͻ anaasɛ awofoͻ anaasɛ obi ne ne namfofoͻ bɛnya a,aneɛ ne abusuafoͻ wͻ aberɛ a ͻbɛdi nokware adanseɛ no. Ɛwͻ sɛ yɛhwɛ nokware adanseɛ so yie mpo wͻ aberɛ a ɛbɛtwe wͻn a wͻbɛn yɛn ne wͻn a wͻdimu ma yɛn ne mpanimfoͻ abufuo aba yɛn so. Onyankopͻn aka sɛ mfasoͻ ne mfasodeɛ a obi nya no ɛnnfiri obi atorͻ adanseɛ a ͻdi nanso ɛyɛ Onyankopͻn no adom. Sɛ obi pɛ na sɛ ͻfa Onyankopͻn a ɛbɛboa no. Adanseɛ a ɛnnyɛ nokware no bɛboa no mmerɛ tiawa bi mu na ɛnsunswansoͻ bͻne a ɛdi akyire no ɛso. Ɛnti ɛwͻ sɛ yɛde Onyankopͻn yɛ y’adamfo na yɛhwehwɛ deɛ ɛbɛma y’abɛn No na yɛbɛka nokware na y’ayɛ pɛrpɛr sɛdeɛ ɛbɛyɛ na y’ayͻ pɛpɛɛpɛ. Ɛwͻ sɛ obi ka nokware wͻ n’abrabͻ mu, gyesɛ yɛbɛdi y’ankasa y’apɛdeɛ so na y’atwe yɛho afiri pɛpɛɛpɛyͻ ho na yɛbɛka deɛ ɛnnyɛ na nteaseɛ ɛnni mu na yɛde nokware no asie na ɛno bɛtwe Onyankopͻn abufuo aba yɛn so. Ɛwͻ sɛ yɛka so hwehwɛ Onyankopͻn animonyam na ɛwͻ sɛ ɛyɛ n’ani nasoͻ.
Da koro bi na ɛwͻ sɛ Bͻhyɛ Messiah (ANN) no ɛdi adanseɛ ɛfa afuo ho. Na basabasayɛ bi wͻ adwumayɛfoͻ no ɛfa ɛnnua bi ho. Wͻnom a na wͻyͻ adwuma wͻ asaase no so nim sɛ aberɛ biara no Bͻhyɛ Messiah (ANN) no di nokware adanseɛ na saa ara na ͻkaa no wͻ Ɔtɛmmuafoͻno anim sɛ ͻwͻ ͻno no nteaseɛ mu no, adwumayɛfoͻ no wͻ ɛnnua no ho kwan. Bͻhyɛ Messiah (ANN) no papa ne n’abusuafoͻ ani anngye neho, ɛnso ne nyinaa akyire no ͻkaa nokware. Wei ne gyinabrɛ a Bͻhyɛ Messiah (ANN) no hyɛ de too hͻ a ɛwͻ sɛ obiara ɛdi so, na saa gyinabrɛ wei na Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no hyɛɛ yɛn sɛ yɛn ni so.
Onyankopͻn ɛka sɛ deɛ ͻdi adanse kunumuuno bɛtumi adaadaa ewiase ɛnso “Onyankopͻn Ɔnim deɛ woreyɛ nyinaa yie” Ɛnti sɛ yɛka no ɛfa baabi sɛ yɛpɛ sɛ yɛma asomdwie ɛterɛ wͻ mantamu na yɛkyerɛ ewiase nyinaa ͻkwan tenenee no na ɛnso ɛkwan foforͻ so no, yɛn suban ne yɛn kasa ɛbͻ abira ɛmma yɛn nnya mfasodeɛ biara na sɛ yɛtumi tu mpͻn wͻ asomdwie ne ahobanbͻ ho na wei na ɛbɛma yɛho aba mfasoͻ wͻ mantamu. Gyidini mapa ne deɛ ͻkasa tia deɛ ɛnnyɛ ɛno nkoa ɛso na yɛbɛma nteaseɛ ne pɛpɛɛpɛyͻ na ͻbɛma adanseɛ biara wͻ Onyankopͻn wͻ mmera so. Kyɛfa a ɛfiri Surah Al Maidah a yɛdi nkan aka no ɛkyerɛ gyinabrɛ a ɛwͻ soro a Onyankopͻn ɛhwehwɛ ɛfiri yɛ hͻ wͻ pɛpɛɛpɛyͻ wͻ ɛnoͻma mu. Ɛnni kwan sɛ yɛ pɛpɛɛpɛyͻ no ka yɛnkoara yɛ mu; ɛmpo y’atamfo ɛhia pɛpɛɛpɛyͻ ɛfiri yɛ hͻ, ɛwͻ sɛ yɛhyɛ wͻn bͻ sɛ wͻnom bɛhunu pɛpɛɛpɛ ne nokware anaasɛ nokware no bɛda adi. Ɛwͻ sɛ agyidifoͻ mapa no ma wͻn atamfo no hunu sɛ adeɛ biara wͻnom bɛyɛ no ɛgyina Nyame suro so na obi ɛtan biara mma no mfiri nokware ne pɛpɛɛpɛyͻ ho. Ɛtan biara ɛmfiri y’akoma mu na yɛka no sɛ yɛ nni ͻtan anaasɛ bonsamsɛm ɛfa obiara ho. Ampaara sɛ, mpo ͻtan bͻne ne adeɛ a ɛnnyɛ a ɛfiri y’atamfo hͻ no nni kwan sɛ ɛtwe yɛn firi pɛpɛɛpɛyͻ ho a ɛbɛha wͻn. Wei ne Islam nkyerɛkyerɛ pa a yɛkyerɛ mu kyerɛ afoforͻ na ɛma wͻn nkanya na ɛma wͻn hwehwɛ pii fa Islam ho.
Ɛwͻ mu sɛ yɛnsɛm no twe ɛwiase nyinaa adwene ba yɛ so, ampaara sɛ, yɛnsɛm a ɛfa pɛpɛɛpɛyͻ ne yɛnsɛm a ɛfa asomdwie ho ne ahobanbͻ no bɛnya nsunswansoͻ wͻ aberɛ a yɛde bɛyͻ adwuma. Na wͻka sɛ “nya aboterɛ wͻ Allah kwan so”. Onyankopͻn de asodie kɛseɛ ato yɛn so. Ɛhanom aboterɛ no gyina hͻ ma sɛ yɛbɛyͻ pɛpɛɛpɛ wͻ ahohiahia mu na y’abͻ ban wͻ kwan soronko so. Ɛyɛ ahohiahia mu na y’ayere yɛho wͻ kwan soronko so a yɛnngyae dabiara da na yɛbɛkͻ so ayere yɛho a ɛho nsunswansoͻ no de asomdwie bɛba, pɛpɛɛpɛyɛ ne ahobanbͻ wͻ saa wiase yi. Ɛnɛ ɛyɛ agyidifoͻ mapa no asɛdeɛ Ahmadiyya Muslimfoͻ no bɛkͻ so ayɛ adwuma ahwehwɛ pɛpɛɛpɛyͻ, nokware, asomdwie ne ahobanbͻ na yɛde bɛhyɛ yɛtiri mu ɛho mfasodeɛ. Wei nyinaa te saa ɛfiri sɛ yɛn na yɛahunu Islam nkyerɛkyerɛ pa no ase a ɛfiri Imam a ͻbaa saa berɛ yi na afei yɛbɛyere yɛho na yɛde ayɛ adwuma wͻ kwan a yɛde ɛmmera nsɛm no bɛyͻ adwuma. Ɛwͻ sɛ yɛ hunu no wͻ yɛmu sɛn na yɛ si yɛ pɛpɛɛpɛ na asomdwie a yɛde yɛ adwuma, ɛwͻ sɛ yɛ hunu no wͻ y’akoma mu sɛ yɛ yere yɛho sɛ yɛbɛnya gyinabrɛ a Bͻhyɛ Messiah (ANN) no de too hͻ wͻ aberɛ a ͻdii adanseɛ de tia ͻno ankasa ne papa.
Sɛ yɛyͻ a, ɛneɛ adɛn nti na sintͻ wͻ yɛn fie mu? Adɛn nti na ͻdͻ ne tema biara nni yɛn nkutahodie mu, a wei ɛreha mmͻfra yi. Adɛn nti na anuanom nkutahodie ɛtͻ sini yi? Adɛn nti na sinitͻ ba wͻ aberɛ a yɛ dwene bͻne fa afoforͻ ho yi, nokware biara nni mu yi? Adɛn nti na namfoͻ a yɛfa no wͻ adwuma no ɛwie wͻ abufuo ne ͻtan mu yi? Adɛn nti na nsɛm a yɛde kͻ nsɛmdibea no ayɛ bebiree yi? Ɛnesɛ, ne sɛentia ɛfiri sɛ akoma no gyinabrɛ ne yɛn nsɛm ne yɛn abrabͻ no bͻ abira. Yɛ wͻ gyinabrɛ ne baako ma yɛho na gyinabrɛ baaako nso ma afoforͻ. Ɛwͻ sɛ Ahmadiyyani biara ɛfa ho, wͻn a wͻwͻ dibrɛ ne Jama’at mma no, ɛkwna a wͻnom bɛfa so ayɛ pɛpɛɛpɛ na wͻnom adi nokware sɛdeɛ ɛbɛyͻ na wͻn bɛtwetwe Onyankopͻn anigyeɛ. Nokware ne sɛ, ɛwͻ sɛ yɛhunu Onyankopͻn ɛmmera no na yɛyere yɛho sɛ yɛde bɛyͻ adwuma.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no kaa sɛ, baabiara nni hͻ a ahobanbͻ wͻ tesɛ Onyankopͻn ahobanbͻ. Na ɛnne sɛ, yɛntumi nnya mfasodeɛ bi sɛ yɛkyerɛ sɛ y’anntumi annyɛ a. Nti obi bɛtumi aka sɛ nsukͻm de no a, sɛ ͻbɛnom nsuo ketewaabi tesɛ ɛresͻ ko no enntumi ɛmma no mmee? Anaasɛ sɛ ͻkͻm de wo paa na wote aduane baako pɛ no ara na w’amee? Obi bɛtumi amei yie paa agyesɛ w’adi aduane a ɛbɛmee no anaasɛ w’anom nsuo a ɛbɛma amei ansaana w’amee. Saa ara na gyesɛ yɛn suban ho te. Sɛ wopɛ aduane bi ne mfasodeɛ no yɛnnya Allah ani nngye suban bͻne ho na nhyira biara so nni mu. Ɛyɛ nokware sɛ Allah ahyɛ bͻ sɛ, sɛ yɛbͻ bra a N’ani bɛgye ho a, Ɔbɛhyira so.
Onyankopͻn ama yɛn asɛdeɛ sɛ yɛmfa asomdwie ne ahobanbͻ nsɛm no nkͻ ewiase nyinaa. Wei nti ɛwͻ sɛ yɛyͻ pɛpɛɛpɛyͻ na yɛdi nokware. Yɛ bɛtumi anya pɛpɛɛpɛyͻ no a gyesɛ obi di Onyankopͻn mmera no so. Ɛhia ɛfiri yɛhͻ sɛ yɛbɛdwene ho na y’ayɛ Onyankopͻn asɛdeɛ ne onipa nso asɛdeɛ de ama wͻn. Onyankopͻn mmoa yɛn na yɛntumi nyɛ na yɛn nyɛ yɛn fie ne yɛn mantamu ͻsoro ahenman mu wͻ Islam nkyerɛkyerɛ pa no so na afei yɛntumi nka Nyamesɛm. Onyankopͻn mmoa yɛn na yɛntumi nkyerɛkyerɛ pɛpɛɛpɛyͻ mu nkyerɛ ewiase na yɛmmͻ ewiase ho ban ɛmfiri ͻsɛeɛ mu. Ewiase no ɛrekͻ n’anim ntɛmsoͻ kͻhyia ͻsɛeɛ. Pɛpɛɛpɛyͻ nni Muslimfoͻ anaasɛ wͻn a wͻnnyɛ Muslimfoͻ ntamu, nnyɛ pɛpɛɛpɛyͻ nkoara na wͻnom ani atra wͻn anintͻn wͻ basabasayͻ mu. Wͻ saa aberɛ wei, Jama’at Ahmadiyya nkoara na ɛbɛtumi ayi ewiase afiri basabasayͻ mu. Wei nti na obiara nyere ne ho deɛ ͻbɛtumi biara na afei wͻnnane ne ho nkͻ mpaebͻ mu. Muslimfoͻ ama no a wͻnntumi nnyɛ pɛpɛɛpɛ no ama basabasayͻ wͻ wͻnom mu na ɛtwetwe adeɛ a ɛyɛ hu nso ba wͻn so. Ɛma yɛhunu sɛ ͻkoo kɛseɛ paa bi ɛbɛba. Ewiase nyinaa ɛnnhunu amaneɛ a ɛde bɛba na asɛ obiara mfa ho. Wͻ saa gyinabrɛ wei na nkoa ma Muhammad Messiah no, ɛho hia sɛ wͻyɛ wͻn asɛdeɛ ne sɛ wͻbɛbͻ mpaeɛ. Onyankopͻn mmoa yɛn na yɛntumi nyɛ yɛn asɛdeɛ na yɛn nyi ewiase no mfiri ͻsɛeɛ mu!